Ngaba ukuthengisa okuthembekileyo kunomvuzo? | Martech Zone
Ngaba ukuthengisa okuthembekileyo kunomvuzo?
NgoLwesibini, Meyi 29, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kwiminyaka eyadlulayo, Seth Godin wabhala eli binzana lidumileyo Imvume yokuThengisa Wabhala incwadi emnandi kuyo. Ndinekopi ebhaliweyo endiyithandayo kwaye ndiyithengile yonke incwadi ukusukela. Ukuthengisa okusekwe kwimvume kuyamnandi kuba umthengi wakho ukunike imvume yokuthengisa kubo - isivumelwano esifanelekileyo.
Ndiye ndachola nje Uqoqosho olunzulu: Ubutyebi boLuntu kunye neKamva eliQinisekileyo by UBill McKibben ngokuyalelwa ngumhlobo olungileyo uPat Coyle. Ndifunde isahluko sokuqala kwaye ndibambene. Imiphetho yencwadi kwicala 'lokuGcina uMhlaba' lweshishini kodwa ibonelela ngendlela eyahlukileyo endiyithandayo.
Andilulo nje olu 'luhlaza ngecala' lomntu. Ngokwenene ndingumntu okholelwa kubungxowankulu nakwinkululeko. Ukuba ufuna ukuhamba uqhuba i-SUV etshisa itoni yerhasi, lilungelo lakho elo. Ukuba ufuna ukungakhathali kwaye utshabalalise umhlaba, qhubeka uzame. Ewe ndiyakholelwa nakwibhalansi yamandla kunye nedemokhrasi ukuzama ukunqanda. Ngaphezu kwako konke, ndiyakholelwa ekubeni noxanduva lomntu ngezenzo zakhe… nto leyo endizisa kwintengiso efanelekileyo.
Apha eIndiana, baya kunika imali mboleko yekhaya kuye nakubani na. Nangona amakhaya efikeleleka, iIndiana yenye yezona ndawo zikhula ngokukhawuleza kwilizwe. Luphi uxanduva kubantu abathengisa la makhaya kubantu abaziyo ukuba abanako ukuzifikelela? Ukuba ugqirha umisele ababulali beentlungu kumlutha, siya kuba sikulungele ukubaphosa ejele. Kodwa umthengisi ongenankathalo othengisa iimveliso okanye iinkonzo kubantu abangazidingiyo akaphathwa nje ngasemva, bavuzwa ngokwasemalini. Thengisa ngaphezulu kokuninzi…
Ndiza kubuyela kwinqaku lam malunga noxanduva lokuphendula okomzuzwana… Ndiyakholelwa ukuba sinoxanduva lwezenzo zethu. Ndikwacinga ukuba kufuneka sisebenzise uxinzelelo kwabo bazama ukukhohlisa okanye ukusebenzisa iimfuno zabantu kunye neemfuno zabo. Ukuthengisa okuthembekileyo kufanelekile. Ukuthengisa uxanduva kuthetha ukuthengisa imveliso okanye inkonzo owaziyo ukuba umntu uyayifuna kumntu oyifunayo. Abathengisi abanoxanduva benza ukuthanda kwabathengi, kubongela ixesha okanye imali…. ayizithengiseli nto ngenxa yokuyithengisa.
Kwisahluko sokuqala soQoqosho olunzulu, icela umngeni kwingcinga yokuba 'okungcono kungcono' - inkcubeko etyholwa ngurhulumente nabathengisi. Uyakhuthazwa rhoqo ukuba uthenge into yokudlala, imoto entsha, indlu entsha… yitya, itye, itye kwaye uya konwaba. Kodwa asonwabanga ngakumbi. Andizukungena kwiinkcukacha koku - konke kukwam Imanifesto yolonwabo. Ndiyathemba nje ukuba ndiyifunda le ncwadi ukuba ayikhalanga 'luhlaza' kodwa iyatyhala imibutho encinci ebambe ukuziphendulela.
Yeka ukuthengisa ngakumbi kuninzi. Thengisa ngakumbi ngokufumana abantu obaziyo bayayidinga! Ukuba injongo yokufumana kwakho kukukhawulezisa ukugcinwa kwakho, ngekhe uthengise iimpahla zakho kwisihlwele esifanelekileyo-okanye mhlawumbi awunayo imveliso elungileyo okanye inkonzo ukuqala.
tags: UBill McKibbenUqoqosho olunzulupat coyle
Ifunwa: Itekhnoloji eyongezelelweyo
Meyi 30, 2007 kwi-8: 13 AM
Ingcinga yam ibisoloko ingathi awuthengisi ngenene, ubonelela ngenkonzo komnye umntu oyifunayo. Nokuba mkhulu kangakanani okanye mncinci kangakanani, kodwa uya kuhlala uphumelela ekuhambeni kwexesha (akusoloko kukufutshane) ukuba ugcina engqondweni ukuba "ungathengisi", kodwa "ukhonze". Ngaphandle kokuba, ewe, igama lakho nguRonCo kwaye unecandelo lokushicilela igalikhi / itswele chopper / kodwa ke kukho olu luvo, uya kuphumelela nabantu abanjengam abathanda izixhobo kwaye abakwazi ukulala ke ngoko ukuthenga izinto abangazidingiyo. Ukukhonza, lelo ligunya lethu ngokwenene kulo Mhlaba, akunjalo?
Meyi 30, 2007 kwi-9: 03 PM
Watsho kakuhle uJules. Ndicinga ukuba igunya lethu mayibe kukukhonza. Ndizama ukuqonda ukuba ngubani endiza kumkhonza nokuba abenzele ntoni.